Qoraalka Sunshine wuxuu keenayaa diidmo deg deg ah oo ka timaada hogaamiyaasha daneeyayaasha dalxiiska Kenya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Qoraalka Sunshine wuxuu keenayaa diidmo deg deg ah oo ka timaada hogaamiyaasha daneeyayaasha dalxiiska Kenya
Tirokoobyo ay sababiyeen ilo ka tirsan dowladda Kenya shalay oo ku saabsan hoos u dhaca ku yimid nasiibka dalxiis ee boqolkiiba 4 kaliya ayaa keentay jawaabo deg deg ah oo aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn oo ka imanaya daneeyayaasha hormoodka ah.
Tirokoobyo ay sababiyeen ilo ka tirsan dowladda Kenya shalay oo ku saabsan hoos u dhaca ku yimid nasiibka dalxiis ee boqolkiiba 4 kaliya ayaa keentay jawaabo deg deg ah oo aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn oo ka imanaya daneeyayaasha hormoodka ah. Agaasimaha Serena Hotels 'ee Iibka iyo Suuqgeynta Ms. Rosemary Mugambi ayaa si doodi ah ku heshay ereyadii ugu haboonaa si ay u muujiso diidmada sii kordheysa ee warshadaha ee khadka rasmiga ah ee dowladda. Tirooyinka ay soo xigatay qoraalkeeda oo si weyn loogu akhriyay baraha bulshada isla markaana dib loo faafiyey lana wadaagay guud ahaan Kenya, gobolka iyo suuqyada muhiimka ah, ayaa muujisay hoos u dhac aad uga sareeya tiradii shalay ay dowladdu qirtay, waana hal sabab oo dhalisay cambaareyn ballaaran. halkan waxaa laga helay ilo ku sugan Nairobi iyo Mombasa.
Bayaanka Maamulka Serena ee ku saabsan 4% hoos u dhaca ku yimid dalxiiska sida ay sheegeen Guddiga Dalxiiska Kenya:
4% KU GUJI Dalxiis! WAA IN AAN KAFTAMO!
Markii aan la kulanno hadalada noocaas ah ee aan la xiriirin xaqiiqda jirta, waxaan la yaabanahay haddii KTB iyo warshadaha dalxiiska Kenya "ay ku wada noolaadaan isla Kenya." Dalxiiska ayaa 30% hoos udhacay sanadka 2012 sanadka 2013, taas oo aan aheyn sanad buuq badan sababo la xiriira doorashooyinka, dhibaatada Westgate iyo soosaarida VAT.
Sanadka 2014 waxay kuxirantahay gobolada aad eegto - Xeebta Kenya tusaale ahaan waxay hoos uga dhacday 30% ilaa 50% sanadka 2013; Suuqa safari ee ku tiirsan xeebta (Tsavo; Amboseli) si la mid ah hoos ayuu u dhacay; Mara, Mt. Kenya, Nakuru waxaa soo maray hoos u dhac 20% ah.
Masiibada dhibaato kasta waa "MARKII AAN QAADAN KARIN AYAA DHIBAATO YAHAY - MIDNA WELIGII XAL AH MA RABTO." Waqtigan xaadirka ah ganacsatadu way dhibaataysan yihiin, walaalaheenna iyo walaalaheenna reer Kenya waxay waayaan shaqooyin, waxsoosaarka, beeraha, kalluumeysiga, alaab-qeybiyeyaasha curio iyo hawlwadeennada doomaha dhammaantood saameyn xun ayey ku yeesheen. Dakhliga KRA ee ka soo gala dalxiiska waa inuu sidoo kale hoos u dhigaa.
Kaliya maahan ganacsi sidii caadiga ahayd - Yeynaan iska ciyaarin.
Agaasimaha Iibka iyo Suuqgeynta
Adeegyada Dalxiiska Dalxiiska - Hoteelada Serena
Kala hadal dhambaal
Waa wax aan caadi aheyn in eeyaha ugu sareeya warshadahayada ay la soo baxaan go'aan noocaas ah laakiin markaa waxaan u sheegnay dowlada marar badan iyo in markale aysan jirin meel loogu talagalay hadalada qoraxda. Waxaan u baahanahay inaan wajahno xaqiiqooyinka dhulka ka jira xaqiiqooyinkaas iyo tirooyinkaasna waa kuwo is-sharxaya. Ma qiyaasi karno shaqooyinka lumaya, uma maleynayno in hoteelada iyo dalxiisyadu ay xiran yihiin kuwa wali furanna ay wajahayaan mustaqbal aad u xun. Dawladeena iyo hay’adaheeda kaladuwan wax rukhsad ah kuma lahan runta hadday runtooda iyo runteenuna aad u kala duwan yihiin, waxay hadda filan karaan in lagu horkeeno madal furan. Waa inaan hadda wajahno xaalada sida ugu adag oo ay noqon karto waxaana kaliya oo sheegi karaa Chris Modigell, halyeey soo arkay dhamaantiis oo soo maray marxaladihii iyo marxaladihii ku dhowaad 40 sano ee Kenya. Markuu dhaho soo-kabashada, haddii si habboon loo soo rogo, waxay qaadan kartaa illaa 3 sano oo aan isaga si dhab ah ugu qaado marka loo eego markii uu buunkeenna CS ka hadlayo in Shiinuhu ay ka bixin doonaan khasaarihii suuqyada Yurub. Ma ogtahay in sanadkii la soo dhaafay ka soo dhoofkeenna Shiinaha ay dhab ahaan hoos u dhacday. Miyay ka warqabtaa in tiirarka tat of Visa tallaabooyinka ay u badan tahay in ay Kenya ku lumiso kumanaan dalxiisayaal Koonfur Afrika ah oo hadda taga Zanzibar? Xukuumadani way balanqaaday wayna balan qaaday waana aragnaa looska. VAT-ka diyaaradaha iyo dayactirka diyaaraduhu wali way jiraan iyagoo ka dhigaya duulimaadyadeenna qaali, VAT adeegyada dalxiiska ayaa wali ka dhigaya safarkeenna iyo dalxiisyadeenna qaali, ma jiraan duulimaadyo caalami ah oo toos ah oo loo qorsheeyo inay Mombasa u aadaan diyaaradaha duulimaadyada caalamiga ah iyo xitaa kuwa dalkeenna. Dalxiiskii Lamu hadda waa dhammaaday laakiin toogashadii ugu dambeysay ee shalay loo geysto qof dalxiise ah oo ku sugan magaaladii hore ee Mombasa waxay xeebta ku noqotay dharbaaxo halis ah. Waxaan u nugul nahay inaan noqono kuwa hadal haya mana nihin wax sameeyayaasha iyo howlwadeenada dalxiiska ee dibadaha malaha dheg jalaq uma siinin hadalada la soo diray kadib dhacdadan naxdinta leh ee KTB ama wasaarada. Miyaynaan maqal damaanad qaad laba toddobaad ka hor ah oo ah in booliska dalxiiska la kordhin doono iyo in booliis joogto ah iyo nabadgelyo laga heli doono dhulka. Tani waa xaqiiqda aan ku wajahnay halkan Mombasa mana jiro wax hadal ah ama ereyo ah oo dib u hagaajin kara dhaawaca dhacdadan ugu dambeysay. Waxaan u baahanahay oo kaliya inaan hada fariisano oo aan rajeyno in la heli karo ilo si looga badbaado abaaraha dalxiiska ilaa inta soo galayaashu ay mar kale ka kici doonaan, ”ayaa laga soo xigtay ilo caadi ah oo ku saleysan xeebta oo sii deynaya markii la weydiiyay inay faallo ka bixiso
Tiro ilo kale oo joogto ah, oo doorbidaya magacyadooda, ama in ka yar ama ka hooseeya tirooyinka ay soo xigatay Agaasimaha Serena ee Iibka iyo Suuqgeynta iyo heerar kala duwan ayaa muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin dadaallada dowladda ee soo celinta amniga iyo bixinta waaxda dalxiiska ee gargaarka aadka loogu baahan yahay gaar ahaan VAT.
Xafiiska arrimaha dibedda ee Jarmalka ayaa sidoo kale habeenimadii xalay daabacay talobixin cusub oo dhanka socdaalka ah taasoo “si deg deg ah ugu talinaysa in laga waantoobo booqashooyinka magaalada Mombasa” labada toogasho awgeed. Qaarkood waxay kaloo tilmaameen talobixintii ugu dambeysay ee amniga ee kooxda safarka ee ugu weyn Jarmalka ee TUI ayaa hadda dhigay dhammaan boorarka ogeysiiska hoteelada iyo meelaha dalxiis ee ay ku isticmaalaan Kenya kuwaas oo hadda "si deg deg ah uga talinaya safarka Lamu," habka ay ugu sheegayaan martida meesha inaysan aheyn booqday oo lagu daray "waxay ka waanineysaa safarka Mombasa," taas oo in kasta oo amarka mamnuuca uusan aheyn hadana waxay u badan tahay inay keento martida ka imaaneysa meelaha loo dalxiis tago inay doortaan inaysan imaan magaalada, marka laga reebo Fort Jesus suuqa ugu weyn had iyo jeer wuxuu ahaa soojiidashada muhiimka ah ee dalxiisayaasha iibsaday dhir udgoon iyo waxyaabo curio ah. Mid ka mid ah akhristayaasha joogtada ah, oo sida muuqata ugu dhow Komishanka Sare ee Ingiriiska, ayaa sidoo kale kaga jawaab celiyey horumarka socda fududeed "waanu kuu sheegnay sidaasna ku xasuusnow buuqii aad gaysatay waqtigaas oo naga dhigayey inaan u ekaano sharwadayaasha," taas oo dabcan aan waxtar lahayn si kastaba ha noqotee.
Wuxuu yiri qof kale oo wax ku biiriya joogtada ah: “Balala mar wuxuu kahadlay in KTB ay hesho 2 bilyan oo shilin. Wuxuu sifiican u fahmay dalxiiska marka loo eego wasiirrada kale ee aan ku arko xafiiska. 200 oo milyan ayaan wali lajirin KTB sannadkan maaliyadeedna waxaa si sharaf leh loo siiyay 500 milyan, oo warqad ah. Waxaan wada ognahay in warqadda iyo xaqiiqadu ay yihiin laba shay oo kala duwan. Waa run in istiraatiijiyadda dib u soo kabashada ay marka hore u baahan tahay in la dejiyo ka dibna si ballaadhan looga wada hadlo daneeyayaasha laakiin markaa lacagta waa inay jirtaa si ay suuqyada ugu dhacdo. Laakiin sidoo kale aan si cad u sheego, haddii waxyaabaha sida sida Lamu county iyo Mombasa county aan la joojin, si kasta oo aan lacag ugu daadino suuqa, dalxiisayaashu way iska fududaan doonaan waxayna raadin doonaan meelaha ay u maleynayaan inay yihiin meelaha ugu wanaagsan ee fasaxa loo tagi karo.
Ololaha socda ee Kenya #Maxaa Sababta JacaylkaKenya uu wali usocdaa guul laakiin looma turjumeynin dib udhac hantiyeed wali, inkasta oo ay gacan ka geysato soo bandhigida jardiinooyinka quruxda badan ee Kenya, dhawrista iyo keydka ciyaarta, hoteelada safari iyo xeryaha iyo meelaha xeebta ee booqdayaashu filan karaan inay helaan u safraya dalka.
Furitaanka Terminal-ka cusub ee cusub ee loo yaqaan (1 Terminal XNUMXA) ee garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ayaa hada waxaa inaga xiga asbuucyo wuxuuna aad u wanaajin doonaa khibrada rakaabka marka uu ka duulayo ama ka dhoofayo garoonka ugu weyn Kenya. In badan oo wanaagsan in la sheego, in badan ayaa run ah, laakiin wararka xun ayaa si cad u culeys saamaynaya hadalka kor u kaca oo kaliya ma ahan in la tirtiro saameynta togan laakiin waa ka sii xun, ka tag waxyaabo badan oo taban oo raagaya marka loo eego sawirada iyo sheekooyinka qurxoon, maya macno leh sida edbinta loo sheegay iyo sida wanaagsan ee sawirada kuwani yihiin.
Sidaas oo ay tahay, Kenya waxay u qalantaa in la taageero oo markii wax walba la sheego oo la qabto, dhammaan kuwa dhaha ama sameeya ama dhaha ama sameeya, waxay sii joogi doonaan Kenyanka, iyaga oo ka shaqeynaya warshad ay noloshooda ka soo qabteen shaqooyinkoodii iyo mihnadoodii oo aan runta loo sheegin, si kasta oo ay tahay way adag tahay in la sheego, waxay kaliya wiiqi doontaa kalsoonida Kenya ay ku qabto dibedda, iyo sidoo kale gudaha.